Magaalada Kismaayo Xaaladeeda Oo Degan kaddib iska horimaad Shalay ka dhacay | Raadgoob
Magaalada Kismaayo Xaaladeeda Oo Degan kaddib iska horimaad Shalay ka dhacay
Maamul gobollleedka Jubbaland ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay dagaal shalay bartamaha magaalada ku dhaxmaray ciidamo ka wada tirsan Jubbaland, kaa oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Afhayeenka laamaha Amaanka Jubbaland Saciid Cabdi Joogsade oo la hadlay VOA ayaa sheegay xaalada magaalada waqtiga tahay mid degan, waxaana uu intaa ku daray in gacanta lagu soo dhiggay 11 askari oo ka qeyb ka ahaa dagaalkii shalay maalmihii ugu danbeeyay-na magaalada ka waday ayuu yiri khalalaase iyo falal nabad-galyada ka dhan ah.
‘’Ciidamada dagaalamay labada dhinac-ba waxaa ay ka tirsanaayeen Jubbaland, iska horimaadka ayaa ka danbeeyay howlgal ciidamadu ay ka wadeen guud ahaanba xaafaddaha ay magaaladu ka kooban tahay oo ay isku dayeen qeyb kale oo ka mid ah ciidamada daraawiishta Jubbaland in ay is hortaagaan’’ ayuu yiri afhayeenka.
Saciid Joogsade ayaa sidoo kale ciidamada la dagaalamay kuwa maamul gobolleedka Jubbaland ku eedeeyay in ay si bareer ah u toogteen nabadoon caan ka ahaa magaalada oo isku dayay ayuu yiri in uu kala hadlo falalka amaan darro oo ay ka wadeen magaalada.
‘’Waxey toogasho ku dileen nabadoon, waan ka tacsiyeey-neynaa, geerida nabadoonka, howlgalka-na dhamaanba waxaa lagu soo qabtay ciidamadii qalalaasaha ka sameeyay magaalada, waana maxkamad sugayaal’’ ayuu yiri afhayeenka laamaha Amniga.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in dagaalka shalay uu ahaa mid culus oo bartamaha magaalada leysku weydaarsaday hub culus oo ay madaafiic ka mid ahaayeen.